Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Brazil Nkuzi Rivaldo Child Plus Story
LB na-egosi Full Story of a Football Legend kasị mara aha na aha njirimara; “Ihe Ngwakọta Zuru ezu”. Rmụaka anyị Rivaldo Akụkọ na akwụkwọ akụkọ na-adịghị mma Akụkọ eziokwu na-ewetara gị ozi zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge. Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ nkwụsị na ON-Pitch amachaghị banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike ya mana ole na ole na-atụle Rivaldo's Biography nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị adieu ọzọ, ka anyị bido.
Rivaldo Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ -Ndụ mbido
Rivaldo Vítor Borba Ferreira AKA Rivaldo mụrụ na 19th nke Eprel 1972 na Paulista, Pernambuco, Brazil. Amuru ya nne ya, Marlúcia Salomão Borba na nna, Late Romildo Ferreira.
A mụrụ Rivaldo na ogbenye ọnụ ntụ ma nwee ihe mgbu na-emetụ na Favela Brazil. Nke a bụ mpaghara dị ala na Brazil nke dara ogbenye n'etiti ndị bi na ya.
Ọdịdị Rivaldo ka na-egosipụta ịda ogbenye ọ hụrụ n'oge ọ bụ nwata. Ihe osise a dị n'okpuru bụ ihe ịrịba ama nke ya.
N'oge ahụ, nsogbu na-edozi ahụ mere ka a ghara ịta ụta ya n'ime ya nke ka dị mgbe ọ ghọrọ okenye. Rivaldo mara na enweela otutu ezé nke mebiri n'ihi nsị na-edozi ahụ na-adịghị ala ala n'oge ọ bụ nwata.
Dị ka ọtụtụ ndị nọ n'ihu ya, Rivaldo hụrụ na egwuregwu bụ egwuregwu ọ hụrụ n'anya ma nwee olileanya maka nzọpụta ya. Otú ọ dị, ihe isi ike nke nwata ya fọrọ nke nta ka ọ ghara imebi nrọ ya.
Rivado adaghị mbà. O jigidere mkpebi siri ike iji nwee ihe ịga nke ọma dị ka ndị isi egwuregwu, n'agbanyeghị na enwere obi abụọ nke ndị nkuzi na-atụ egwu na ụkwụ ya gbadara agbada na ahụ siri ike iji guzogide nsogbu nke football. N'agbanyeghị na ọ nụrụ okwu ndị a, ọ ka nwere ihe ịga nke ọma ịghọ otu n'ime ndị isi 100 kacha elu.
Rivaldo Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ -Ndụ mmekọrịta
Akụkọ akụkọ bọl bụ na mbụ lụrụ nwunye mbụ, bụ Rose Ferreira, maka afọ iri nke gbasara site na 1993-2003. Alụmdi na nwunye ya jupụtara na esemokwu ka a na-ebo ya ebubo ịbụ onye aghụghọ.
A kọrọ na Rose Ferreira jere ije n'alụmdi na nwunye ha mgbe mkparị aghụghọ rutere na Rivaldo bụ onye ya na ndị enyi nwanyị abụọ nọ na-akpakọrịta n'oge ahụ bụ ndị bịara ndụ ya mgbe ọ nwụsịrị dị ka ndị na-agba ọsọ kacha mma n'ụwa.
Nke a mere ka alụmdi na nwunye na nkewa gbaa alụkwaghịm. Rose ghọrọ nne nke ụmụ ya abụọ (nwa nwoke Rivaldinho na ada Thamirys) A na-ese ha niile toro eto n'okpuru;
N'oge ịgba alụkwaghịm mgbe ụmụaka abụọ dị obere, Rose kpọghachiri ha na Brazil site na Milan ebe di ya na-egwuri egwu. Nke a mere ka Rivaldo hapụ ebe obibi Milan na otu n'ime enyi nwanyị ya. O mesịrị biri na Gris iji kpọọ Olympiacos.
O di nwute, nwunye Rivaldo bu onye nwuru. Ihe kpatara ọnwụ anaghị ama. Rivaldo kpughere ozi a na Instagram tinye na 14th January 2015.
Mgbe ha gbara alụkwaghịm, Rivaldo gara Gris were otu n'ime ụmụ nwanyị nwanyị abụọ. Oge a, ọ bụ nke ọ kacha hụ n'anya. Onye hụrụ ntutu ntutu ya n'anya. Nwanyị a họọrọ ghọrọ onye mara mma Eliza Kaminski Ferreira.
O lekọtara ya nke ọma dị ka a hụrụ na foto ahụ. Nke a mere ka Rivaldo lụọ ya. O nyekwara ya nnukwu osisi na ụlọ ọrụ Brazil nke o nwere.
Ozugbo alụmdi na nwunye ha gasịrị, a mara ọkwa na di ya họpụtara Eliza dị ka onye isi oche nke ụlọ ọrụ egwuregwu ya, Mogi Mirim. Cheta na: Rivaldo nwekwara ma kpoo ụlọ klọb a ọbụna mgbe ọ dị agadi na 43.
N'agbanyeghị nke ahụ, na nhọpụta ahụ, Rivaldo mere Eliza ka ọ bụrụ Wilson Bonetti, onye bụ ọkàiwu maka afọ 20 na onye ọka iwu ya nke lụrụ agha niile metụtara iwu ya tinyere nke nwunye ya. Karịsịa, dị ka online ihe ndekọ, a họpụtakwara Eliza dịka onye na-ahụ maka otu egwuregwu bọọlụ ọzọ akpọrọ, R10 Soccer School, LLC nke di ya nwe.
Ya na ọmarịcha Eliza Kaminski Ferreira, Rivaldo mụrụ ụmụ nwoke abụọ; (João Vitor Ferreira, Isaque Ferreira) na ụmụ nwanyị abụọ bụ; Thamirys Borba Ferreira na Rebeca Rebeca Ferreira. N'okpuru bụ foto nke ezinụlọ ya.
Rivaldo Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ -Na-eme Akụkọ
Rivaldo mere akụkọ ihe mere eme dịka nna naanị ya na nna ya na-egwuri egwu (site na nwunye ya gara aga) ma ma ihe ijuanya meriri n'otu egwuregwu ahụ na ụlọ ọrụ ya.
N'ezie, maka oge mbụ na akụkọ ihe mere eme nke football, ọgbọ atọ nke ezinụlọ Rivaldo dị na egwuregwu ahụ megide XV nke Piracicaba ka egwuregwu ahụ mere na Estadio Romildo Ferreira, stadium nke aha ya bụ Rivaldo.
Ezigbo ezinụlọ Rivaldo ejiri aha ha dee akwụkwọ akụkọ ihe mere eme na bọlbụ, akwụkwọ ndekọ nke Guinness.
Cheta na: Akụkọ akụkọ Brazil bụ 43 (nke e sere n'elu) n'oge ahụ, ọ bịara na bench maka Mogi Mirim na nhazi egwuregwu nke Sao Paulo State na sonyere nwa 20 dị afọ iri na abụọ.
Rivaldo Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ -Ihe esemokwu na Val Gaal
Na 1999, Rivaldo nọ n'ogo nke ọrụ ya ma merie Ballon d'Or n'afọ ahụ.
Akwụkwọ akụkọ Brazil na Barca gwara onye nkụzi ya, Van Gaal na ọ ga-egwu n'azụ onye na-egbu ihe ma si n'ebe ọ nọ na-ahapụ nku. Nke a adighi ala dika Van Gaal jụọ ya obi ike ịkụziri ya ọrụ ya. Nke a rụpụtara na Rivaldo na-akwadozi Van Gaal ọtụtụ egwuregwu. Cheta na: Rivaldo bụ ụwa kachasị mma n'ụkwụ n'oge ahụ.
Ndị enyi ha bụbu ndị enyi mesịrị ghọọ ndị iro. Van Gaal ama ebubo ebubo n'ihu Rivaldo mgbe ọ na-azụ ọzụzụ na foto dị n'okpuru. Nke a mere ka Rivaldo rịọ ka a nyefe ya na AC Milan.
Site na ndi enyi na ndi iro- Akụkọ nke Rivaldo na Van Gaal.
Ndị Spanish na-ekwukarị mgbe niile na mkpebi Dutchman ahụ bụ Rivaldo. Mgbe ole Van Gaal hapụrụ Spain maka oge mbụ, mgbasa ozi tinyere Rivaldo mere ememe njem ya.
Rivaldo Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ -Arụmụka
Rivaldo meriri iko World na 2002 na ndị nwoke Luiz Felipe Scolari. O meriri ya site na esemokwu mgbe o nwetara Hakan Unsal nke Turkey ka o gosipụtara na bọmbụ na-eti ya na ihu mgbe a tụbara ya n'apata ụkwụ ya.
Rivaldo Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ -Ndụ Ezinụlọ
N'ụzọ dị mwute, nna nna Rivaldo bụ Romildo Ferreira nwụrụ n'ihe mberede okporo ụzọ na 1989.
Romildo gbara nwa ya ume mgbe niile ka ọ gbasaa nrọ ya, ọnwụ ya bụ nnukwu ihe ọkpụkpụ Rivaldo na-eme atụmatụ ịmalite ọrụ ya n'oge ahụ. Otú ọ dị, Rivaldo malitere ọrụ ya ma lụsie ọgụ ike iji merie ma ọ bụ ihe ndị ọ na-atụghị anya na ndị nwere obi abụọ bụ ndị na-akpọ ya mgbe nile 'adịghị ike ma na-edozi ahụ.'
Ọ ghọrọ ọkachamara ọkachamara n'otu afọ ahụ papa ya nwụrụ.
A maghị mama mama Rivaldo nke a maara dị ka Marlúcia Salomão Borba. Akụkọ na-ekpughe na ọ bụ onye na-elekọta ụlọ n'oge ndụ ya niile. Banyere ụmụnne ya. Rivaldo nwere ụmụnne nwoke abụọ aha ya bụ Ricardo Vítor na Rinaldo Borba Ferreira. Ọzọkwa, otu nwanna nwaanyị aha ya Cristiane Ferreira Diniz.
Rivaldo Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ -Nchịkọta Ọrụ
dị nnọọ ka Didier Drogba, Rivaldo emeghị egwuregwu football ọ bụla. Ọ bụkwa onye mbido mbido ọrụ ya. Ọ malitere ịkụ bọl n'afọ 1991 mgbe ọ dị afọ 19. N'agbata 1991 - 1993, Rivaldo na-akpọ Santa Cruz, Mogi Mirim na ndị Kọrịnt.
Na 1994, ọ gbanwere ndị nnọchi anya mpaghara wee kwaga Palmeiras, na-enyere klọb aka ịchebe mmeri nke otu afọ ahụ.
Tupu asọmpi nke 1996, Parma kwupụtara na ha abanyela Rivaldo na onye otu ya bụ Amaral si Palmeiras. Mgbe egwuregwu Olympic gasịrị, enwere esemokwu, kama Italytali, Rivaldo kwagara Spain ka ọ sonyere Deportivo La Coruña na La Liga.
O mechara gbanwee FC Barcelona na 1997 na nkwekọrịta mbufe na-echekwa Deportivo ijeri pesetas 4 (ihe dị ka $ 26 nde).
N'oge mbụ ya na Barcelona, ​​Rivaldo meriri okpukpu abụọ nke La Liga na Copa del Rey. Na 1999, o meriri aha La Liga ọzọ na Barcelona. A kpọrọ Rivaldo FIFA World Player nke Year ma merie Ballon d'Or n'afọ ahụ.
Mgbe agbachitere Barcelona na-enweghị ihe ịga nke ọma na Njikọ Njikọ, Rivaldo jikọtara ya na ọpụpụ Camp Nou na Milan n'afọ 2002. Mkparịta ụka alụmdi na nwunye ya bụkwa ihe mere o ji hapụ Milan.
Rivaldo kpebiri ịla Brazil n'oge mbụ 2004, site na nhọpụta nke onye nlezi Vanderlei Luxemburgo bụ onye mere ka o kwenye na ọ ga-atụfu atụmatụ nile nke Europe. Otú ọ dị, akụkụ ya site na egwuregwu ahụ dị mkpirikpi (11 egwuregwu na ihe mgbaru ọsọ 2).
Na 22 July 2004, Rivaldo laghachiri Europe ọzọ, na-esonyere Olympiacos. O nyere goolu 43 n'ime egwuregwu 81 maka Olympiacos.
Ogbenye Olympiacos weputara ya mgbe ya na onye isi oche nke ulo a siri kwuo na o meela agadi ka ya na ndi ozo soro. Ọ hapụrụ ma gaa n'ihu na-egwuri egwu maka ọtụtụ obere kọmpi tupu ya enwee klọb nke ya. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Rivaldo Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ -Ihe a na-echeta ya
Maka ụkwụ aka ekpe ya (ma dị oke ọnụ).
Maka ịbụ otu n'ime ndị kachasị mma n'ime ndị odeakwụkwọ Brazil.
Maka nchikota ya, ngbaputa nke ndi mmadu na ndi ozo.
Maka inwe ike idozi egwuregwu ọjọọ n'ime otu nkeji.
Maka ịbụ onye ọkpụkpọ nsogbu. Onye siri ike na mkparịta ụka ego.
N'ihi ịbụ ọkachamara n'ịgba bọl, Rivaldo bụ onye a ma ama maka ịgbachi free kicks na ntaramahụhụ.
N'ihi na ígwè ígwè ya. Ana m eche na ị na-echeta foto a nke ọma. 🙂
Maka ịbụ n'etiti 'FIFA 100'. Nke a bụ ndepụta nke ndị na-agba ọsọ ndụ kachasị elu nke akụkọ akụkọ Brazil Pele.
N'ikpeazụ, a na-echeta Rivaldo maka mmeri Ballon D'Or yana FIFA World Player of the Year Award na 1999.
Anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!